Dukaanka ‘If iyo Aakhiro’ ee Jig Jiga oo lagu iibiyo agabka dadka dhintay lagu aaso - BBC News Somali
Dukaanka ‘If iyo Aakhiro’ ee Jig Jiga oo lagu iibiyo agabka dadka dhintay lagu aaso
Dad meyd ku tukanaya janaaso (Sawir Hore).
Waxaa jira dukaan aadan waligaa arag noociisa oo kale oo laga furay magaalada Jig Jiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida sida uu kusoo waramayo wariyaha BBC-da ee halkaas Cabdinaasir Sheekh Maxamed Xikam.
Ma ahan dukaan aad badeecadiisa isticmaali kartid adiga oo nool, balse waa mid qof kasta oo dadka ka mid ah uu qirsanyahay in maalin uun uu u baahan doono.
Dukaanka waxaa lagu magacaabaa If iyo Aakhiro, waxaana iska leh haweenay lagu magacaabo Xaliimo Muxumed oo u warantay BBC-da "Anagu dharkii aakhiro ayaan meesha ku gadnaa, dad baa nagu yiri hiddo iyo dhaqanka ku dara, kuma dari karo ayaan iri, aakhiro iyo adduun isma garab galin karo ayaan iri, waxaa naloogu soo hagaagayaa labiskii aakhiro".
Jigjiga oo indho fiiqid bilaash ah laga fuliyay
Balse waxaa jira dad dukaankan soo dugaashada sida Xasan Sheekh Muxumed oo yiri "If iyo Aakhiro ayaan hor joognaa, mana aanan arag hadda ka hor wax magacan ku qorta, dadkuna waa safar oo maalin kasta qof ayuu tigidka u go'anyahay, --- Aniga habeen iyo maalinba Illaahay agtiisa u dhowoow ayaan isleeyahay".
Gabar Soomaali ah oo warbaahinta Hindiya hadal heynteeda qabsatay markii laga qalay Kansar
Maalqabeen sheegay in uu hawada sare kusoo ciyaarayo
Feysal Cali Waraabe: Hangoolkeyga waa sida Ushii Nebi Muuse"
Kaniiniga Viagra ma wuxuu daweeyaa xanuunka asaasaqa?
Ruushku ma waxa uu isu diyaarinayaa inuu xoog ku galo Ukraine?
Muxuu Faransiiska u sii daayay ninka loo xiray dilkii Jamaal Khaashuqji?